ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသခံကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ဒူဘိုင်းရှိအထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
Million Makers Dubai သည်ဒူဘိုင်းနှင့်တိုင်းပြည် ၁၀၉ ခုအတွက်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းမှကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းသည်။
ဒူဘိုင်း၌မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိရိယာများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
ဒူဘိုင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ ဒူဘိုင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဒူဘိုင်းအတွက် Virtual နံပါတ်၊ ဒူဘိုင်းအတွက် CRM Solutions၊ ဒူဘိုင်းအတွက် virtual office၊ ဒူဘိုင်းအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီ ၁၀၉ နှင့်အတူဒူဘိုင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ဒူဘိုင်းသည်ယူအေအီးနိုင်ငံရှိလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ကမ်းခြေပေါ်ရှိအာရေဗျကျွန်းဆွယ်၏အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးဒူဘိုင်းသည်အနောက်အာရှ၏စီးပွားရေးအချက်အချာဖြစ်သည်။ အလားတူပင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့် payload များအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယာဉ်စင်တာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌ရေနံပေါကြွယ်ဝမှုကိုအမှန်တကယ်မူဘောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုနှင့်စည်ကားနေသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာနှင့်အတူမြို့တော်သည်ဒူဘိုင်းစီးပွားရေး၏ဗဟိုချက်တွင်လဲနေသည်။ Jebel Ali ထိန်းချုပ်မှုဇုန်ကို ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးစက်ရုံအလုပ်ရုံသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့ကိုအခြေခံကာလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အလူမီနီယံသန့်စင်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ဖန်တီးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ထို့အပြင်ဒူဘိုင်းသည်စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆွဲဆောင်ရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ ဒူဘိုင်း၏ခိုင်မာသောစီးပွားရေးအတွက်အဓိကပံ့ပိုးပေးသောအရာတစ်ခုမှာပြင်ပမှပြင်းထန်သောငွေကြေးအစိတ်အပိုင်းများကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလားတူပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းအသစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ပြုလုပ်ရန်စွမ်းရည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဒူဘိုင်း၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲစီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေသည့်အဓိကနယ်ပယ်များမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်သည်။
အဆင့် A / PRIM စီးပွားဖြစ်နေရာများ
ဒူဘိုင်းသည်ရုံးခန်းနေရာအသစ်တွင်ရေကြီးမှုကိုတွေ့နေရသည်။ ၎င်းသည်ခရိုင်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ 2017-2020 အကြား, Prim သို့မဟုတ် Grade An ရုံးခန်းသည်ရုံးခန်းအသစ်များ၏ ၇၁% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ပူးပေါင်းအာကာသပုံစံသည်စီးပွားရေးလောကကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပြီးဒူဘိုင်းသည်လည်းအထူးကိစ္စမဟုတ်ပါ။ တီထွင်မှု၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့်အလယ်အလတ်ပူးပေါင်းသောနေရာများရှိသည်။ ထို့အပြင်အများစုသည်ရှေ့တန်းရုံးများနှင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်အတူလိုက်ပါလာကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤရွေးချယ်စရာများသည်သူတို့၏အဖွဲ့အစည်းများအားဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။
စီးပွားရေး - ရင်းနှီးအစိုးရ
ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဆွဲအတွက်သိသာထင်ရှားသောအချက်များထဲကတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်း၏စီးပွားရေးအရလိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောနည်းဗျူဟာများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များသည်ဒူဘိုင်းတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရိုးရှင်းပြီးအကျိုးရှိစေသည်။ မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မဆိုအနည်းငယ်သာဂရုမစိုက်သောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မဆိုစီမံခန့်ခွဲမှုကအခြေခံကျသောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဒူဘိုင်းတွင်အစိုးရသည်အဖွဲ့အစည်းများအားကူညီရန်ကူညီသည့်ဝန်းကျင်ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည်သူတို့ကိုအောင်မြင်စေပြီးတာရှည်ခံနိုင်သောထိန်းသိမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။
ဒူဘိုင်းတွင်အမြဲတမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲအခမဲ့ဇုန်များ (ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးဇုန်) ရှိသည်။ ဤဇုန်များသည်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ရပ်ကွက်အတွင်းကြံရာပါသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအော်ပရေတာအဖြစ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအများပြည်သူလိုအပ်သည်သောမြေပြင်အနေအထားပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်ခြားနားသည်။ လွတ်လပ်သောဇုန်အားလုံးသည်ပြည်ပရောက်လုပ်ငန်းများကိုစီးပွားရေးအတွက် ၁၀၀% တာဝန်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အရင်းအနှီးနှင့်အကျိုးအမြတ်များကိုဒေသန္တရလုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူလိုက်ပါစေသည်။ လွတ်လပ်သောဇုန်အစီအစဉ်သည်စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအားကော်ပိုရိတ်အခကြေးငွေများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပေးဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မကပေးဆောင်ခြင်းမှချွင်းချက်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင်သွင်းကုန် / ပေးပို့ခြင်း retention သို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းနှစ်စဉ်တာဝန်များလည်းမရှိ။
စံပြအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ခြင်းသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုကြိုးစားနေသည်ကိုသရုပ်ပြနိုင်သည်။ သို့တိုင်၊ ဒူဘိုင်းတွင်အဖွဲ့အစည်းများသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောရေကန်တစ်ခုမှအကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့်သူများကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ၎င်းတွင်ထူးကဲစွာသင်ကြားခြင်း၊ ထူးကဲသောအရည်အချင်းရှိပြီးအတွေ့အကြုံမရှိသောအလုပ်သမားများပါဝင်သည်။
ဒူဘိုင်းသည်အမြတ်လဲလှယ်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးအတွက်အမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရန်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုကသူတို့ကိုပြသခြင်းနှင့်တင်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းပြပွဲများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတသမတ်တည်းရှိသည့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တင်ဆက်မှုများသည်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစုံကိုကန့်သတ်မထားပါ။ အဲဒီအစားသူကအခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးဖုံးလွှမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒီဇိုင်းနှင့်ခမ်းနား, အော်တို, မြေယာ, လေ့ကျင့်ရေး, တန်ဆာများနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းများ။ ဤတံခါးဖွင့်တံခါးများသည်ယူအေအီးနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများရှေ့တွင်မဟုတ်ဘဲအဖွဲ့အစည်းများအားတင်ပြချက်များကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်ထို့အပြင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သင်တန်းသားများကိုမှီခိုသည်။
ယူအေအီးသည်ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးကုန်ကြမ်းလဲလှယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးသင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်ဤအချက်သည်တစ်သမတ်တည်းရှိခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်ယနေ့ပင်တည်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည်စင်တာအမှတ်ကိုဖလှယ်နိုင်သောစာရင်းဖြစ်သည်။ ယူအေအီးတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏စီးပွားရေးကဏ္approachများကိုသင်ချဉ်းကပ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အာရှ၊ အာဖရိက၊ တောင်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ဥရောပတို့၏စီးပွားရေးကဏ္approachများကိုသင်ထပ်မံချဉ်းကပ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်ငွေလဲလှယ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤအရာသည်ခေတ်မီလေနှင့်သမုဒ္ဒရာဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သည်။ ဒါကယူအေအီးမှာအတူတကွအလုပ်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်။
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) ခုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ဒူဘိုင်းရှိ Company Incationation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ဒူဘိုင်းတွင်သင်၏နေရာလွတ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ ဒူဘိုင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ခြင်း၊ virtual နံပါတ်ဒူဘိုင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပြုခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိစီးပွားရေးတန်ဖိုးများ၊ ဒူဘိုင်းရှိ CRM Solutions၊ ကုန်သည်အကောင့်ဒူဘိုင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ Web development၊ ဒူဘိုင်းရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒူဘိုင်းရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒူဘိုင်းရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဒူဘိုင်းရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒူဘိုင်းရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊
ဒူဘိုင်းတွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် ဒူဘိုင်းနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဖြေများကိုဒူဘိုင်းမှပေးအပ်ခြင်း၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ရှိသော ၀ န်ထမ်းများကိုဒူဘိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းကောင်းငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ ဒူဘိုင်းရှိစီးပွားရေးအရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ virtual နံပါတ်များ၊ ဒူဘိုင်းတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဒူဘိုင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒူဘိုင်းရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway ဒူဘိုင်းတွင်ဒူဘိုင်းတွင်ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်ငွေကြေးအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ ဒူဘိုင်းတွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိနှင့်လိုက်နာမှု၊ ဒူဘိုင်းရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဒူဘိုင်းရှိဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒူဘိုင်းရှိအီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်ဒူဘိုင်းရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒူဘိုင်းနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ဒူဘိုင်းတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးသူများဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်း (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်း (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်း
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်း
Dubai စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္မဏီအတွက်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ Chop and Seal
●ဒေသခံကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၄၀၀၀
●ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်ခခ - ၁၅၀၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ ဒူဘိုင်း၌ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●ဒူဘိုင်းရှိ Local Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လိပ်စာကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်
●ဒူဘိုင်းရှိ Local Company အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ပေးအပ်ခြင်း
●ဒူဘိုင်းရှိ Local Company အတွက်သင့်ရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမှာ - စာချွန်လွှာနှင့်အသင်း ၀ င်စာတမ်းများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဒူဘိုင်းတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ် ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒေသခံကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက် Merchant အကောင့်
ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဒေသခံကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်ဒူဘိုင်း၌တည်၏
အကယ်၍ သင်သည်ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သား။ ဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ ဒူဘိုင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဒူဘိုင်းရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဒါ့အပြင်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဖောက်သည်များနှင့်ဒူဘိုင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာသင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်အနေဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဒူဘိုင်းမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်လျှင် ကျွန်တော်တို့မှတဆင့်ဒူဘိုင်း။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းတွင်ပါဝင်သည်၊ သင်နှင့်သင်တို့၏မိသားစုအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်လျှောက်ထားလိုပါကဒူဘိုင်းအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သော အဘို့ ဒူဘိုင်းနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ဒူဘိုင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဒူဘိုင်း ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်း.
ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီ Incoporation နှင့်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဒူဘိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုဒူဘိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကြံပေးချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကိုပေးသည်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း - အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုဒူဘိုင်းအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးသတ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်“ ဒူဘိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒူဘိုင်းဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအတွက်အခြေခံဝန်ဆောင်မှု / ဒူဘိုင်းရှိအထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွင်
ဒူဘိုင်းရှိဒေသခံကုမ္ပဏီများအတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာ / ဒူဘိုင်းရှိအထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ။
ဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လက်မှတ် / ဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိအထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက၊ ဒူဘိုင်းရှိ Local Company / ဒူဘိုင်းရှိအထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ။
ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဒူဘိုင်းရှိပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ / ဒူဘိုင်းရှိအထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည်ဒူဘိုင်း၌လိုအပ်သောလိုင်စင်မပါဘဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုချက်ရသည့်ဒူဘိုင်းတွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုခြင်းဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့ဒူဘိုင်းတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောကူညီမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ ထီ၊ ဒူဘိုင်းတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဒူဘိုင်းရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်လဲလှယ်ခြင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်လုံခြုံချုပ်နှောင်ထားန်ဆောင်မှု။
သင်ဒူဘိုင်းရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ ဒူဘိုင်းရှိ Forex အကျိုးဆောင်များသို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်များအတွက်မည်သည့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဒူဘိုင်းနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်နိုင်ငံ ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
Million Makers ကိုဒူဘိုင်းတွင်သာမကနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ဒူဘိုင်းရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်း၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံရှိဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ဒူဘိုင်းရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ | စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဒူဘိုင်းတွင်ရှိသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ
ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဒူဘိုင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဒူဘိုင်း.
Accounts Outsourcing Dubai
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဒူဘိုင်းတွင်သင်အပ်နှံနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဒူဘိုင်း၌တည်၏။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဒူဘိုင်းတွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုလျှော့ချပြီးဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ဒူဘိုင်းရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းဒူဘိုင်း၌။ "
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဒူဘိုင်း.
ဒူဘိုင်းတွင် Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ဒူဘိုင်းမှကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်။
ဒူဘိုင်းရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ ဒူဘိုင်းရှိအခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်သင်၏ဝယ်ယူသူဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - ဒူဘိုင်းအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ဒူဘိုင်းရှိ Business VoIP အပါအဝင်ဒူဘိုင်းရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းမှုများ၊ ဒူဘိုင်းရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံရှိဒူဘိုင်းမှ
ဒူဘိုင်းတွင် Website တည်ဆောက်ခြင်း
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဒူဘိုင်း ဒူဘိုင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ဒူဘိုင်းရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒူဘိုင်း, ဒူဘိုင်းရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဒူဘိုင်းရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဒူဘိုင်း၌မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေသူများ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီမည့်အရာများအကြောင်းကိုဒူဘိုင်းတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသခံကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းတွင်ဒေသတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်း၌ဒေသတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်ဒေသခံကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းဒေသခံကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းပြည်တွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းဒေသခံကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်ဒေသခံကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်ဒေသခံကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ပံ့သည် ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC တည်ထောင်ခြင်း ဒူဘိုင်းတွင် GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းတွင် GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းတွင် GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေထရေးဒင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကမ်းလွန်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC တည်ထောင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းတွင် General Trading LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC တည်ထောင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်, ဒူဘိုင်းတွင် Offshore အထွေထွေထရေးဒင်း LLC, မှတ်ပုံတင်, ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်း LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်း LLC မှတ်ပုံတင်, ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်း LLC မှတ်ပုံတင်, ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းတွင် GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်း၌ GEC LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင် GEC LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန် GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန် GEC LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dubai GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dubai GEC LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dubai GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dubai Offshore GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dubai Offshore GEC LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းရှိ GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းတွင် GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင် GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင် IBC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်း GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်း GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်း GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန် GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန် GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းတွင် GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းတွင် GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင် GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန် GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dubai GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dubai GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dubai GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dubai Offshore GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dubai Offshore GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Local Company ကိုဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ General Trading Company ကိုဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ General Trading LLC ကိုဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဒူဘိုင်းတွင် GEC LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ ဒူဘိုင်းတွင် GEC IBC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ ဒူဘိုင်းတွင် GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုဒူဘိုင်း၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်း၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်အထောက်အကူများမှာ - Emirates တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Emirates တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Emirates မှကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Emirates မှကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Emirates မှကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဒူဘိုင်းတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဒူဘိုင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏အကူအညီဖြင့်ဒူဘိုင်း၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြင့်အောင်မြင်မှုရပြီးနောက် Emirates ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ , စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှိ Emirates ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Emirates ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Emirates ရှိဝန်ဆောင်မှုများ၊ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှိ Emirates ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Emirates ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Emirates ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ Emirates ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ပါ၊ Emirates ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ပါ၊ Emirates ရှိ setup ကုမ္ပဏီ၊ Emirates တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ၊
ဒူဘိုင်းတွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စည်ပင်သာယာဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Emirates တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ | ဒူဘိုင်း | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ၊ ဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေ၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒူဘိုင်းတွင်, ကုမ္မဏီဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်ကျခဲ့သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဒူဘိုင်း | Emirates တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ဒူဘိုင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Emirates တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။ ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း General Trading LLC ဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒူဘိုင်းတွင် GEC LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒူဘိုင်းတွင် GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒူဘိုင်းတွင် GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းဒေသခံကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရှိသောကမ်းလွန်ဒေသခံကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတွင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသခံကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းဒေသခံကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်ဒေသခံကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရှိသောကမ်းလွန်ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရှိသောကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များ၊ ဒူဘိုင်းဒေသတွင်းကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းမှု၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဒေသခံကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းနှင့်ဒူဘိုင်းရှိဒေသခံမဟုတ်သူများနှင့်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အထွေထွေကုန်သွယ်ရေး Compan y, ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေထရေးဒင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်းနှင့်အတူနေထိုင်သူများ၊ ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်း LLC တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရှိသောကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကမ်းလွန်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအထွေထွေထရေးဒင်း LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ - ဒူဘိုင်းရှိ GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Offshore GEC LLC ဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင် GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်း GEC LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန် GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန် GEC LLC မှတ်ပုံတင်၊ ဒူဘိုင်းရှိ Offshore GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းတွင်ရှိသော Offshore GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဒူဘိုင်းရှိ GEC LLC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ GEC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းရှိ GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်း GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန် GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရှိသော GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကမ်းလွန် GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင် GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင် GEC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းနှင့်မနေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်း GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ Offshore GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒူဘိုင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန် GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းကမ်းလွန် GEC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန် GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကမ်းလွန် GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိ GEC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊
ဒေသတွင်းကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းတွင်ထည့်သွင်းပါ ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒူဘိုင်းတွင်အထွေထွေထရေးဒင်း LLC ဒူဘိုင်းတွင် GEC LLC ထည့်သွင်းပါ ဒူဘိုင်းတွင် GEC IBC ကိုထည့်သွင်းပါ ဒူဘိုင်းတွင် GEC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
ဒူဘိုင်းတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ Incorporation Services | ဒူဘိုင်းတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဒူဘိုင်းတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်း
ကျွန်ုပ်၏အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်း၌သင်၏ Company Incorporation Services သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကုမ္ပဏီစာရင်းကိုင်များနှင့်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှပေးအပ်သည်။ ဒူဘိုင်းတွင်နှင့်ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံကိုဒူဘိုင်းတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဒူဘိုင်းရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအား Emirates တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ပေးသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒူဘိုင်းမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
အကယ်၍ သင်သည်ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဒူဘိုင်းတွင်အလားတူပင်၊ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်စော်ဘွားများကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်စော်ဘွားများကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ သို့မဟုတ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဒူဘိုင်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဒူဘိုင်း အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးတို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်။
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒူဘိုင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူအများ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်ဒူဘိုင်းရှိသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ကင်းသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်ဓာတုပစ္စည်းများကိုဒူဘိုင်းရှိသို့မဟုတ်မှဒူဘိုင်းမှသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမပြုရ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဒူဘိုင်းရှိသို့မဟုတ်ကနေဒူဘိုင်းသို့သွားသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမခံရပဲ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့မှသာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းရှိ၊
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုဒူဘိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဒူဘိုင်းမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည်မဟုတ်။
●ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဒူဘိုင်းရှိသို့မဟုတ်ကနေဒူဘိုင်းသို့ ၀ င်ခွင့်မပေးပါဘူး။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဒူဘိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဒူဘိုင်း, ဒူဘိုင်း ဘဏ်အကောင့်, ဒူဘိုင်း ယုံကြည်မှု ဒူဘိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဒူဘိုင်း။ "
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dubai-local-company/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dubai-local-company/ မှလာသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dubai-local-company/